how to create myanmar vcd subtitle ? — MYSTERY ZILLION
how to create myanmar vcd subtitle ?
February 2009 edited December 2010 in Other
ကျွန်တော် home made vcd video ထဲကို အောက်ကလိုမျိုး subtitle or caption ထည့်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီလို subtitle ကို ဘာ software သုံးပြီး လုပ်တာလဲမသိဘူး။ သိတဲ့သူများရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီကြပါအုံး ။
adobe premiere can do that.
Adobe premiere နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲမသိဘူး ? Tutorial လေးများရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီး မစပါအုံး။
Subtitle Creat လုပ်တာက ကိစ္စမရှိသေးဘူး ခက်တာက ဘယ်မြန်မာဖောင့်ကို Encoding လုပ်ပေးလဲမသိတာ..
Subtitle Workshop မှာက မြန်မာဖောင့်က မရတော့ အဆင်မပြေဘူး..VCD လိုတော့မရဘူးပေါ့ဗျာ.....
hard code နဲ့ soft code ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်
hardcode ဆိုရင် အသေပဲ ပြောင်းလို့မရတော့ဘူး ၊ Power Director ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်
soft code အတွက်ဆိုရင် DVD authoring software တစ်ခုခု သုံးလိုက်ရင်အဆင်ပြေတယ် (DVD Lab, ConvertXtoDVD, )
ဗီဒီယိုဖိုင် (Title) / အသံဖိုင် (တရုတ် အင်္ဂလိပ် စပိန် ...) စာတန်းဖိုင် (Srt ဖိုင်ကိုအသုံးများတယ်) တွေကို ပေါင်းပြီး
အဲဒီ srt ဖိုင်တွေကို Subtitle Creator နဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါတွေက softcode အတွက် အ၈င်္လိပ်မြန်မာ စာတန်းပြောင်းဖို့အတွက်ပါ ဒီဗီဒီဇာတ်ကားတွေအတွက်အသုံး၀င်ပါတယ်
VCD သက်သက်ပဲဆိုရင်တော့ ပါ၀ါဒါရိုက်တာ နဲ့ ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေပါတယ်
မြန်မာစာလည်းရပါတယ် တခြား တရုတ် ထိုင်း စတဲ့ဟာတွေလည်းရပါတယ်
power director နဲ့အဆင်ပြေတယ်လား ..ဒာဆိုလုပ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ.......ရှဲ့ရှဲ့ Y3llowCak3(ကလေး).. (http://www.mysteryzillion.org/forums/member.php/7891-Y3llowCak3) (http://www.mysteryzillion.org/forums/member.php/7891-Y3llowCak3)
မြန်မာလိုရေးထားတာလေးမရှိဘူးလားခင်ဗျား.video edditing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့